နှုတ်ခမ်းနီဆိုးတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းရိုက်ကူးနေစဉ်မှာ ရှက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အောင်လေး
နှုတ်ခမ်းနီဆိုးတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းအတွက်ရိုက်ကူးနေစဉ်မှာ ရှက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အောင်လေး
12 Jul 2018 . 9:46 AM
ရာဇဝင်ရိုင်းခဲ့သည် ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မှာပါဝင်တဲ့ မင်းသားအောင်လေး ရဲ့ အနုပညာအပေါ်ခံယူထားတာတွေနဲ့ ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်ကစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ အပေါ်ဘယ်လိုခံစားရသလဲ ဆိုတာတွေကိုမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုရရှိနေတော့ ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ ?
“ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ပရိသတ်က ကျွန်တော့ရဲ့ ဇာတ်ကောင်ကာရိုက်တာကို စိတ်ဝင်စားကြတယ်ပေါ့လေ။တခြားလုပ်နေကြ ကာရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပုံစံပြောင်းနေတဲ့ ကာရိုက်တာဖြစ်တဲ့ အတွက်စိတ်ဝင်စားကြတာလည်းပါမှာပါ။ ပရိသတ်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက် ပျော်တာပေါ့နော်။ အွန်လိုင်းမှာ တင်ထားတဲ့ဗီဒီယို ကိုတွေ့ရတော့ မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေက အဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းကို ကြည့်ပြီး ပေါ့သွားမှာလည်းဆိုးတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လက်တို့ပြီး သွားကြည့်ကြပါဦးလို့တော့ပြောပါရစေ”။
“အခြောက်ကားတွေမိန်းမလျာကားတွေရိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီကားလောက်မခက်ဘူး။ဒီကာရိုက်တာကျတော့ အလယ်မှာရှိနေတဲ့ ကာရိုက်တာ ဟိုဘက်ကြီးကိုလည်း အရမ်းမရောက်ဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်ဘာမှန်းမသိဘဲနဲ့ မိန်းမကိုစိတ်မဝင်စားဘဲ ယောက်ကျားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ပိုပြီးတော့ ခက်တယ်အိုက်တင်တွေကအစ စကားလုံးတွေကအစ အကုန်လုံးကို ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်။ ပိုပြီးတော့စိတ်နှစ်ပြီးလည်းလုပ်ထားသလို ဇာတ်ကားရိုက်နေရင်း နဲ့ထထပြီးရီနေရတာတွေလည်း ကြုံရပါတယ်။ ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေရင်းနဲ့ရီရတာကတော့ မှတ်မှတ်ရရနှစ်ခန်းရှိပါတယ်။ အဝတ်စားလဲခန်းမှာ သူဝင်လာတဲ့ အခန်း ကျွန်တော့ကိုနမ်းတော့မယ်လို့လုပ်လိုက်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းဆိုရင် ဟာနှုတ်ခမ်းမွှေးကြီးတွေနဲ့သိတယ်မှတ်လား သေပြီပေါ့ အိုက်တင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုပြီး ခဏခဏ ကိုထရီဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။ အဲ့လိုအချိန်မှာ Mood သွင်းပြီးခဏခဏ ကိုပြန်ရိုက်ခဲ့ရတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးတဲ့ အခန်းတွေဆိုရင် ပထမတော့ရိုက်နေရင်းနဲ့ ရှက်တဲ့စိတ်တော့ရှိတာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင် ဒီကာရိုက်တာကိုမစီးမျောသေးဘူးဆိုပြီး Mood သွင်းပြီးပြန်ရိုက်ပါတယ်”။
ဒီဇာတ်ကားအတွက် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောချင်တဲ့စကားကဘာများဖြစ်မလဲ ?
“အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက်ဘယ်လိုကာရိုက်တာမဆိုအကောင်းဆုံးလုပ်မှာပဲ။ အခြောက်ကာရိုက်တာဆိုလည်း အခြောက်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်မှာပဲ။ ကိုယ့်ကိုပေးလာတဲ့ ကာရိုက်တာပေါ်မှာလူဆိုးဆိုလူဆိုး ၊ ဥပမာကိုယ်က ခံစားပြီးတော့ ဒီ Mood ကိုရအောင်ယူဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်။ ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်အလုပ်ကိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေတာ ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထည့်ထားပါတယ် လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်”။
“ကိုဇေရဲထက်နဲ့ကတော့ ဒီဇာတ်ကားမှတင်မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ဆုံဖူးပါတယ်။ ဒီကားရိုက်နေတုန်းမှာတချို့အိုက်တင်တွေဆိုရင် သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော့ကိုသင်ပေးတာတွေရှိပါတယ်။ ဒီဟာလေးဆိုရင်ဘယ်လိုလေး နေလိုက်ပါလား ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ပါလားဆိုပြီး သင်ပြပေးတာတွေရှိပါတယ်လို”့ မင်းသားဇေရဲထက်နဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Photo Credit: Aung Lay Facebook ၊ ရာဇဝင်ရိုင်းခဲ့သည် ရုပ်ရှင် Facebook Page
နှုတျခမျးနီဆိုးတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးအတှကျရိုကျကူးနစေဉျမှာ ရှကျခဲ့တယျဆိုတဲ့အောငျလေး
ရာဇဝငျရိုငျးခဲ့သညျ ဆိုတဲ့ရုပျရှငျဇာတျကား မှာပါဝငျတဲ့ မငျးသားအောငျလေး ရဲ့အနုပညာအပျေါခံယူထားတာတှနေဲ့ ဒီဇာတျကားနဲ့ပတျသကျပွီး ပရိသတျကစိတျဝငျစားကွတဲ့ အပျေါဘယျလိုခံစားရသလဲ ဆိုတာတှကေိုမေးမွနျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ပရိသတျတှစေိတျဝငျစားမှုရရှိနတေော့ ဘယျလိုခံစားရပါသလဲ ?
“ဒီဇာတျကားမှာတော့ ပရိသတျက ကြှနျတော့ရဲ့ဇာတျကောငျကာရိုကျတာကို စိတျဝငျစားကွတယျပေါ့လေ။တခွားလုပျနကွေ ကာရိုကျတာမြိုးမဟုတျဘဲ ပုံစံပွောငျးနတေဲ့ ကာရိုကျတာဖွဈတဲ့ အတှကျစိတျဝငျစားကွတာလညျးပါမှာပါ။ ပရိသတျကစိတျဝငျစားတဲ့အတှကျ ပြျောတာပေါ့နျော။ အှနျလိုငျးမှာ တငျထားတဲ့ဗီဒီယို ကိုတှရေ့တော့ မကွညျ့ရသေးတဲ့သူတှကေ အဲ့ဇာတျဝငျခနျးကို ကွညျ့ပွီး ပေါ့သှားမှာလညျးဆိုးတယျ အဲ့ဒါကွောငျ့ကွိုကျတယျဆိုရငျလညျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျလကျတို့ပွီး သှားကွညျ့ကွပါဦးလို့တော့ပွောပါရစေ”။
“အခွောကျကားတှမေိနျးမလြာကားတှရေိုကျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒီကားလောကျမခကျဘူး။ဒီကာရိုကျတာကတြော့ အလယျမှာရှိနတေဲ့ ကာရိုကျတာ ဟိုဘကျကွီးကိုလညျး အရမျးမရောကျဘူး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျတောငျဘာမှနျးမသိဘဲနဲ့ မိနျးမကိုစိတျမဝငျစားဘဲ ယောကျကြားကိုစိတျဝငျစားတဲ့သူတဈယောကျအနနေဲ့ သရုပျဆောငျရတဲ့အတှကျပိုပွီးတော့ ခကျတယျအိုကျတငျတှကေအစ စကားလုံးတှကေအစ အကုနျလုံးကို ကွိုးစားပွီးတော့လုပျထားပါတယျ။ ပိုပွီးတော့စိတျနှဈပွီးလညျးလုပျထားသလို ဇာတျကားရိုကျနရေငျး နဲ့ထထပွီးရီနရေတာတှလေညျး ကွုံရပါတယျ။ ရိုကျကူးရေးလုပျနရေငျးနဲ့ရီရတာကတော့ မှတျမှတျရရနှဈခနျးရှိပါတယျ။ အဝတျစားလဲခနျးမှာ သူဝငျလာတဲ့ အခနျး ကြှနျတော့ကိုနမျးတော့မယျလို့လုပျလိုကျတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးဆိုရငျ ဟာနှုတျခမျးမှေးကွီးတှနေဲ့သိတယျမှတျလား သပွေီပေါ့ အိုကျတငျဘယျလိုလုပျရမလဲ ဆိုပွီး ခဏခဏ ကိုထရီဖွဈနတေော့တာပါပဲ။ အဲ့လိုအခြိနျမှာ Mood သှငျးပွီးခဏခဏ ကိုပွနျရိုကျခဲ့ရတယျ။ နှုတျခမျးနီဆိုးတဲ့ အခနျးတှဆေိုရငျ ပထမတော့ရိုကျနရေငျးနဲ့ ရှကျတဲ့စိတျတော့ရှိတာပေါ့။ မဟုတျဘူးဒါဆိုရငျ ဒီကာရိုကျတာကိုမစီးမြောသေးဘူးဆိုပွီး Mood သှငျးပွီးပွနျရိုကျပါတယျ”။
ဒီဇာတျကားအတှကျ အနုပညာရှငျတဈယောကျအနနေဲ့ပွောခငျြတဲ့စကားကဘာမြားဖွဈမလဲ ?
“အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ အတှကျဘယျလိုကာရိုကျတာမဆိုအကောငျးဆုံးလုပျမှာပဲ။ အခွောကျကာရိုကျတာဆိုလညျး အခွောကျလိုအကောငျးဆုံးလုပျမှာပဲ။ ကိုယျ့ကိုပေးလာတဲ့ ကာရိုကျတာပျေါမှာလူဆိုးဆိုလူဆိုး ၊ ဥပမာကိုယျက ခံစားပွီးတော့ ဒီ Mood ကိုရအောငျယူဖို့ပဲလိုတာပေါ့နျော။ ကြှနျတော့စိတျထဲမှာ ကြှနျတေျာ့အလုပျကိုပဲအကောငျးဆုံးဖွဈအောငျလုပျနတော ဆိုတဲ့စိတျကိုထညျ့ထားပါတယျ လို့ပွောပွခဲ့ပါတယျ”။
“ကိုဇရေဲထကျနဲ့ကတော့ ဒီဇာတျကားမှတငျမဟုတျပါဘူး။ တခွားဇာတျကားတှမှောလညျး ဆုံဖူးပါတယျ။ ဒီကားရိုကျနတေုနျးမှာတခြို့အိုကျတငျတှဆေိုရငျ သူကိုယျတိုငျကြှနျတော့ကိုသငျပေးတာတှရှေိပါတယျ။ ဒီဟာလေးဆိုရငျဘယျလိုလေး နလေိုကျပါလား ဒီလိုလေးလုပျလိုကျပါလားဆိုပွီး သငျပွပေးတာတှရှေိပါတယျလို”့ မငျးသားဇရေဲထကျနဲ့ ဆကျဆံရေးကိုလညျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
Photo Credit: Aung Lay Facebook ၊ ရာဇဝငျရိုငျးခဲ့သညျ ရုပျရှငျ Facebook Page